Gedo: Ciidamada Xoogga Dalka oo dilay dhagar qabayaal ka tirsan Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Gedo: Ciidamada Xoogga Dalka oo dilay dhagar qabayaal ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada Xoogga dalka ayaa howlgallo ay ka fuliyeen deegaanno hoostaga Degmada Doolow ku dilay 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaasi oo doonayay inay si xoog ah ku kaxeystaan xoolo ay lahaayeen dadka deegaanka ah.
Saraakiisha ciidamada hogaamineyso ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay inay ka hortageen boob ay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab la damacsanaayeen dadka xoolo dhaqata ah ee ku nool deegaanno hoostaga Degmada Doolow, kuwaasi oo ku qasbay inay xoolahooda geeyaan meel 60 km dhanka bari kaga beegan Doolow ee Gobolka Gedo, balse ciidamada Xoogga dalka ay ku guuleysteen in dadka deegaanka ay u badbaadiyeen xoolahooda.
Dadka deegaanka ayaa Warbaahinta Qaranka u xaqiijiyey in ay badqabaan xoolihii ay Al-Shabaab dhaca u geysan lahaayeen, ayna u mahadcelinayaan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hortagay boobka loo geysan lahaa xoolahooda.
Saraakiisha ayaa dhankooda xaqiijiyey in wax khasaare ah uusan soo gaarin ayna si gaar ah u bartilmaameedsanayeen argagixisada shacabka dhibaatada ku heysa.
Wafdi ka socda Golaha Aqalka sare oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Kismaayo+Sawirro
Mudug: Shacabka oo bilaabay inay la dagaalamaan Nabad diidka Al-shabaab